အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ရှမ်းရိုးရာ ဝက်သား နန့်ဖစ်အောဝ် (သို့) ရှမ်း ဝက်သား ခရမ်းချဉ်သီးချက်
ခုတလော ဟင်းတွေချည်းချက်နေတယ် လို့အပြစ်မတင်ကြပါနဲ့....သင်္ကြန် က အားရက်တွေ ရတာရယ် အမေရောက်နေတာရယ်နဲ့ပေါင်းပြီး ချက်ထားတာတွေ အကုန် ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်ထားလို့ပါ အကုန်တင်ပြီးတော့ save လုပ်ထားခဲ့တယ် ကိုယ်ခရီးထွက်နေလဲ ဘယ်ရောက်ရောက် ကြုံရင် ကြုံသလိုတင်လို့ရတာပေါ့။
ဒီပုံကတော့ မချက်ခင် ပြင်ဆင်နေတဲ့ အမေနဲ့သူ့သားမက် (မောင်) နဲ့ပါ။ တည့်ကြတယ် တွေ့လား။ ကြက်သွန်ဖြူ ခွာနေကြတာပါ။ တည့်လွန်းလို့ ခက်နေတယ် တခါတခါ ကိုယ်နဲ့မောင် ရန်ဖြစ်ရင် အမေက သူ့ သားမက်ဘက်ကပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် သိပ်ခက်တယ် အမှန်က သူတို့ မတည့်မှ ကိုယ့်အတွက် ကောင်း မှာ လေ။ ခုလောလောဆယ်တော့ အမေက ဂျွန်လ အထိနေမှာဆိုတော့ ကိုယ့်မှာ မောင်နဲ့အတူ မအိပ်ရဘဲယောက္ခမ နဲ့တထောင့်တည ဖြစ်နေတယ်.....
ဒါတွေကတော့ ချက်ပြုတ်ရန် ပြင်ဆင်ရာ အဆင့်ဆင့်ပေါ့နော်.....ခွာပြီးသားကြက်သွန်ဖြူတွေ နဲ့ ငရုတ်သီးတွေ ကိုရေဆေးပြီး စစ်ထားပါတယ်။ ဒုတိယ ပုံက ကြိတ်စက်ထဲထည့်ကြိတ်မယ့် ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်သီစိမ်း နဲ့ပဲပုပ်ချပ်တို့ ပါ ပဲပုပ်ကို တချပ်ခွဲသုံးပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ငရုတ်သီးစိမ်း ကော ကြက်သွန်ဖြူကော ကပ်စေးမနဲ ပါနဲ့ ထည့်သာထည့်ပါ များလေ စားကောင်းလေပါပဲ.... အကုန်ရောပြီး ကြိတ်စက်ထဲထည့်ကြိတ်ထားပါ
နောက်ဆုံးပုံကတော့ ခရမ်းချဉ်သီးပါ သေးလေးတွေကလဲ ခရမ်းချဉ်သီးတွေပါပဲ ကိုင်းသီးခေါ်ပါတယ် မြန်မာပြည်မှာတော့ အလွယ်ရတယ် ဈေးထဲမှာ ကိုင်းသီးလို့မေးလိုက်ရင် ရတယ် ဒီမှာတော့ ပါရာဂွမ်မှာ သွားရှာတာတောင် ကိုယ်လိုချင်တာ သေချာမရဘူး...ပုံမှာ ပြထားတာပဲ ရခဲ့တယ် စိတ်ကြိုက်တော့ မဟုတ်ပေမယ့် ရှိတာလေးနဲ့ဖြစ်အောင်ချက်တတ်တာ တီချမ်းပဲပေါ့နော် ခရမ်းချဉ်သီး ဝက်သားချက်က ကိုင်းသီး နဲ့ မှ ကောင်းတာပါ သူက ပိုချဉ်တယ်လေ ......အရသာပိုရှိတာပေါ့.........
အကုန်ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ စချက်ပါမယ်။ ဆီကို အိုးလေးထဲထည့်ပြီး အပူပေးပါမယ်။ ဆီပူလာပြီဆိုရင် ခုန က အကုန်ရောကြိတ်ထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်သီးစိမ်း နဲ့ ပဲပုပ် ကို ဆီသတ်ပါမယ် မွှေးလာတဲ့ အထိ နည်းနည်းနွမ်းကုန်တဲ့အထိ ဆီသတ်ပေးပါ။ ရွှေရောင်လေးသန်းလာတဲ့အထိပေါ့နော်......(တီချမ်းက ဂရန်းဒ် (ဂီအာအေအန်ဒီ) ဆန်တဲ့အတွက် ဝါလာတဲ့အထိလို့ မသုံးပါဘူး ပိုပြီး ဟိုက်ဆို (အိတ်ခ်ျအိုင်အက်စ်အို) ဆန်အောင် ရွှေရောင်သန်းလာ တယ်လို့သုံးပါမယ်နော် အချေပေါ့အေတို့ရယ်)
နောက်တဆင့်အနေနဲ့ ခုန က ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်သီးစိမ်း ပဲပုပ် ဆီသတ်တာမွှေးလာပြီဆိုရင် နနွင်းမှုန့် နဲ့ အရောင်တင်မှုန့်တွေ ထည့်ပါမယ် ခဏကြော်ပေးပါ ပြီးရင်တော့ ခုန က လှီးချွတ်ထားတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး ရိုးရုိုးကော ကိုင်းသီး ကော ကို ထည့်ပါမယ် ပြီးရင် ခရမ်းချဉ်သီးတွေ နွမ်းလာတဲ့အထိ ဆက်ကြော်ပေးပါ။ သူက နည်းနည်းကြာကြာလေးကြော်ရပါတယ် ခရမ်းချဉ်သီး အခွံတွေပါ နွမ်းကုန်ပြီး အနှစ် လိုလိုဖြစ်လာတဲ့ အထိ ကြော်ပေးပါမယ်နော် ချိုချဉ်ပေါ့ ငံ မြည်းပြီး ဆား အချိုမှုန့် ထည့်ပါ......
ပြီးရင်တော့ ဆာဗ်လုပ်ဖို့အတွက် ခုန က အိုးထဲက ခရမ်းချဉ်သီး ဝက်သားချက် ရှမ်းရိုးရာ အခေါ် နန့်ဖစ်အောဝ် (ဝ သတ်ပါနော်) ကို တည်ခင်းကျွေးမွေးလို့ ရပါပြီနော်......သူက ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ချက်ထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အထားခံအောင် ပိုတာ တွေ ကို သပ်သပ်ဖယ်ပြီးတော့ ရေခဲသေတ္တာ (သိပ်မသစ်တော့) ထဲ ထည့်ထားပါမယ်။ ကုန်သလောက်ပဲ ပန်းကန်ထဲထည့်စားပါ။ သေချာ မသိမ်းရင်နောက်နေ့ အမြုပ်တွေ ထွက်လာပါလိမ့်မယ် အဲ့တာဆိုရင် ပစ်ရပြီပေါ့။
ကြိုက်သလိုစား စားတဲ့သူမှန်သမျှကြိုက်တဲ့ တီချမ်း လက်ရာ ခရမ်းချဉ်သီး ဝက်သားချက်ပါပဲရှန်..........အို........ဘယ်လိုစားစား အိုအိရှိ ကောင်းမှကောင်း သိပ်ဟောက်ချိဇ် ပါပဲ.........
Posted by တီချမ်း at 6:00 PM
Mon Petit Avatar April 24, 2011 at 6:17 PM
Looks so so delicious. Am mouthwatering already. Thank you for sharing KAM.
Rita April 24, 2011 at 7:14 PM
တအားကြိုက်တာ ပဲပုပ်ကို။ ရှမ်းစာတွေဆို သိပ်ကြိုက်စ်စ်
သက်ပိုင်သူ April 24, 2011 at 7:34 PM
ချက်ပါ.. ချက်ပါ.. ချက်နိုင်တော့လည်း ချက်ကြပေါ့လေ..
SHWE ZIN U April 24, 2011 at 8:06 PM
ကျနော် လာဖတ်ပါတယ် လိုင်းမကောင်းလို့ မန့်မသွားရတာ ဝဲပေါက်တာ နဲ့ ဘလော့ဂ် တွေဖြုတ်ချထားလို့ အသစ်တက်မှန်း မသိတာပါ
အခု ပဲပုတ် ဝက်သားချက်လေး စားချင်လိုက်တာ ချက်စားမယ် နောက်ပြီး ညှပ်ခေါက်ဆွဲ ဖတ်နဲ့ စားရင်လည်း ကောင်းမဲ့ပုံဘဲ
သြ ဒါနဲ့ မောင် ကလည်း တနေ့တခြားပိုပို ချော လာသလိုဘဲနော်
nice to read about your cooking. thanks
sweetpeony April 24, 2011 at 9:06 PM
လုပ်စားကြည့်ဦးမယ် တီ...း)
Addy Chen April 24, 2011 at 9:37 PM
အနောနိမတ်စ် က မဝင်းလား?
ဒေါ်ရီတာ စလုံးမှာကော ပဲပုပ်ဝယ်ရလား ချက်ကြည့်လေ လွယ်တယ်
ချက်တယ် သူသူရေ သိပ်သိပ်သိပ်ချက်.......စ်
ဦးရွှေဇင် က ယောက်ျားကြီး မဟုတ်ဘူးလားဘယ့်နှယ့် ....သူများ အမျိုးသားကို........
နောက် အနောနိမတ်စ် ၂ နဲ့ ၃ လာဘတ်တာကျေးဇုးပါ သေချာတာပေါ့ တီ့လက်ရာဆို ကောင်းပြီးသား အိုအိရှိ
လုပ်ကြည့် ပီအိုနီ....ဖြစ်ရင် ပြန်လာပြော မဖြစ်ရင်လဲ လာပြော...
Addy Chen April 24, 2011 at 10:32 PM
ဒေါ်ပေါက်ရေ သတ်သတ်လွတ်ချက်ရင် ပဲပြားနဲ့ အစားထိုးပြီးချက်ကြည့် မိုက်ဒလယ်
Iora April 25, 2011 at 1:10 AM
Vista April 25, 2011 at 10:37 AM
ဒီနေ့ ပဲ ချက်စားပြီးဘီ ကောင်းလိုက်တာ ..
Thet April 25, 2011 at 10:42 AM
Ah Mae nae. Thar Mat pop!
Addy Chen April 25, 2011 at 11:00 AM
iora ကောင်းတာတော့ သေချာတာပေါ့ တီချက်တာပဲ
ဗစ် မိုက်တယ်နော်....ဆလပ်ရွက်နဲ့ထုပ်စားသေးလား မိသစ်ကိုကော ကျွေးသေးလား
မနံတာ...သားမက် နဲ့ယောက္ခမ က တည့်နေကြတယ်လေ မီး ဂွမ်းတာပေါ့
Kyaw Hnin Se Lwin April 25, 2011 at 2:14 PM
Addy Chen April 25, 2011 at 2:33 PM
သေချာတာပေါ့ ကျော်နှင်းဆီလွင် ရေ...အံမလေး ရှည်ထှာ..
ချစ်ကြည်အေး April 25, 2011 at 4:10 PM
တီချမ်း အိမ်မှာ ပဲပုပ်လည်းရှိ၊ ပဲပုပ်အမှုန့်လည်း ရှိပါ့။ အမက ရှမ်းသေလို့ ဝင်စားတာလို့ ကိုယ့်ဘာသာ ဇွတ်လုပ်ထားတာလေ။
အဲဒါမျိုး ချက်ဖူးတယ်တော့်၊ ဝက်သားကြိတ်ထားတာနဲ့တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဝက်သား သုံးထပ်သားနဲ့ ချက်စားတာ။ ခု တီချမ်း ချက်ထားတာလည်း စား ကောင်းမဲ့ပုံ။ သားမက်နဲ့ ယောက္ခမတည့်တော့ ညည်း စိတ်ချမ်းသာရတာပေါ့အေ....:)
Addy Chen April 25, 2011 at 4:13 PM
တည့်လွန်းတော့လဲ မကောင်းဘူး ရှင့်
နောက် ကို ရှမ်းစာတွေ တင်ပေးအုံးမယ် ရှမ်းခေါက်ဆွဲချက်တာ ရှိသေးတယ် ကျိုင်းတုံနည်း ပုံတွေရိုက်ပြီး သား မတင်ရသေးတာ နောက်နေ့ပေါ့နော်
TZA April 25, 2011 at 10:40 PM
စားချင်ဒယ်ဒီဒီချမ်းရယ်.. ဟင်း.. ဟင်း..
Addy Chen April 26, 2011 at 12:27 AM
လာလေ လာလေ ကိုကိုတင်ဇာအေး ရဲ့ နောက်နေ့ ကျရင် ကျိုင်းတုံ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ချက်မယ်
I like shan food.Your curry make me hungry at late late night.Hummmm....delicious:P BTW ur mg looks handsome...:)
Addy Chen April 26, 2011 at 10:56 AM
အင်း အနောနိမတ်စ်တွေကို ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့ ဂျီးဒေါ် ကတော့ ဖြိုးမှလား
Vista April 26, 2011 at 11:42 AM
ဆလပ်ရွက်နဲ့ ထုပ်စားလိုက်တာ သတိရတော့မှ ဆလပ်ရွက်တထုတ်လုံးနီးပါးစားပစ်လိုက်တယ်ဆိုတာ သိတော့တယ် ဟိ
Addy Chen April 26, 2011 at 11:56 AM
ဒီလိုကောင်းတာ မှလား မမဗစ်......
ဆန်ပြား (ညှပ်ခေါက်ဆွဲ ရွက်လေး) ကို ဆလပ်ရွက်ထဲမှာ ထည့်ပြီးမှာ ကလော်စားရင် ပိုတောင်ကောင်းသေး.......
Tun Tun April 26, 2011 at 9:36 PM
Thank for the receipe. ချက်စားကြည့်မယ်။း)
NO,no,no,,,,,,,,,This Gyidaw who asked for montloneyepaw is from Geneva,SWITZERLAND,One of your regular readers.I don't leave comment sometime cos of rush time .....OK........:)
no,no,no,This Gyidaw who asked for montloneyepaw is from Geneva,SWITZERLAND.I often visited your blog.I don't leave comment sometimes cos of rush.
Haveagood time with ur mom n mg......:)
ဟုတ်ပါပြီ ကြီးတော်ရယ် အဲ့တာကြောင့် အနောနိမတ်စ်တွေကို နာမည်နဲ့ရေးဖို့ပြောတာ
I cooked according to ur recipe & tried with shan noodle. very tasty but forgot to put corriander leave :). I'll try again this weekend.
Thanks T Chan. love to read your cooking style.
တီချမ်း February 8, 2012 at 10:05 AM
WD means Wendy. You don't know me. Chose 'Anonymous' as I don't know which one to choose. I like to read your writing style especially cooking recipe.
Tina Kyi April 18, 2012 at 11:22 AM
တီချမ်းဘလော့ဂ်ကို နေ့တိုင်းလာလည်ပီး သားရေကျကျပြန်ရတယ်ကွယ်
khin yamone May 2, 2012 at 11:25 PM
တီချမ်းရဲ့ ဘလော့လေးကိုအခုမှတွေ့လို့ အခုပဲလာလည်သွားပါတယ်..
တီချမ်းတင်သမျှလေးတွေလည်း ဖတ်ချင်လို့ mail submit လုပ်ခဲ့တယ်..
တီချမ်း May 3, 2012 at 8:42 AM
အီးမေး စပ်မစ် လုပ်တာ ရမရပြန်ပြောပေးပါကွယ်
khin yamone May 3, 2012 at 7:05 PM
Confirmed တဲ့ တီချမ်းရေ..
တီချမ်း ချက်သမျှ ရေးသမျှတွေအကုန်လုံးကို နည်းယူဖို့ ဖတ်ဖို့စောင့်နေမယ်နော်..
တီချမ်းလည်း စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ အရာအားလုံးပြည့်စုံပျော်ရွှင်ပါစေ...
တီချမ်း May 4, 2012 at 1:52 PM
ခင်ယမုံ ရတယ်ဆိုရင် တီ့ ဒီအီးမေးလ် ကို ဖော်ဝပ်ပေးပါလား
တီစမ်းတာ မရလို့ဘယ်လိုပုံ နဲပ လာလဲ ကြည့်ချင်တယ်
ပုံတွေကော ကြည့်လို့ ရလား အီးမေးလ်မှာ
khin yamone May 4, 2012 at 10:31 PM
yamone13@googlemail.com နဲ့ တီချမ်းကို forward လုပ်ထားတယ်..